Abu Dhabi, March 3, 2014—-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed oo booqasho rasmi ah ku jooga dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa kulamo kala duwan la qaatay qaar kamid ah mas’uuliyiinta dalka iyadoo uu kala hadlayo sii xoojinta xiriirka labada dawladood ee walaalaha ah , loona dardar-galin lahaa heshiiskii March, 2013 ee dhexmaray Soomaaliya iyo UAE.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa uga mahadnaqay madaxda dalka Isutaga Imaadaarka Carabta dadaalada ku aadan dib-u-dhiska dalka iyo kaalinta firfircoon ee Isutaga Imaaraadka Carabtu ay uga jiraan dib-u-dhiska hay’adaha dawladda.
Labada dhinac ayaa isla gartay in dardar-galin lagu sameeyo heshiisyadii horay u dhexmaray labada dawladood ee la xiriirray dib-u-dhiska dalka Soomaaliya, xoojinta xiriirka siyaasadeed iyo kordhinta gargaarka bani’aadanimo ee dalka Imaadaardku u fidiyo dadka Soomaaliyeed.
“Waan sii xoojinaynaa xiriirka walaaltinimo ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Isutaga Imaaraadka carabta, waxaana ay gacan libaax ka gaysanayaan dib-u-dhiska hay’adaha kala duwan ee dawladda, kaabayaasha dhaqaale iyo ka qayb-galka adeegyada bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo horumarinta dhalinyarada.” Ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdiweli Sheekh Axmed.
Abu Dhabi, Isutaga Imaaraadka Carab